Hatolotra ny Fitsarana izy ireo rehefa vita ny famotorana. Matetika tato ho ato ity hetsiky ny polisy ao Analakely ity.
"Nanomboka tamin’ny 8 ora maraina ny alatsinainy teo io hetsika fanadiovana an’Analakely io. Ny talata tamin’ny 8 ora maraina vao nifarana izany. Ankizy tsy ampy taona eo anelanelan’ny 12 ka hatramin’ny 18 taona ny ankamaroan’ireo voasambotra ireo. Manaraka mpizaha tany mody mangataka izy ireo kanefa mangarom-paosy. Misy ihany koa ireo manendaka. Tafiditra amin’ireo ihany koa anefa ireo izay tsy nitondra karapanondro amin’ny alina. Hadihadiana izy ireo ary tsy maintsy hatolotra ny Fitsarana avokoa", hoy ny avy amin’ny polisim-pirenena.
Andro vitsy lasa izay dia efa nisy ihany koa ny hetsika nataon’ny polisy teny Analakely mikasika ireto mpirenireny ahiahiana ho mpangarom-paosy sy mpanendaka eny an-toerana ireto. Am-polony ihany koa no tratra tamin’izany ary tsy ampy taona no betsaka. Araka ny fantatra dia nisy tamin’izy ireo no efa nalefa eny amin’ny toby fitaizana zaza kamboty ary misy no naiditra eny amin’ny fonjan’Antanimora mihitsy.
Mbola hitohy ity hetsika ataon’ny mpitandro ny filaminana ity, araka ny fantatra.
"Mielanelana ny fotoana hanaovana izany. Na eo aza ny fotoana tsy hisian’ny fisamborana dia misy hatrany ireo polisy izay manao fanamiana sivily efa mitily ireo olona ahiahiana eny amin’ny Araben’ny Fahaleovantena sy eny amin’ny « pavillon » sy ny manodidina", hoy ihany ny avy amin’ny polisy.